किन धराप हुँदै गयो नेपाली सँगितिक क्षेत्र ? | ArtistSansar.com
किन धराप हुँदै गयो नेपाली सँगितिक क्षेत्र ?
लामो समयसम्म सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको नेपाली साँगितिक क्षेत्रको अवस्था हालसम्म पनि जिँउका तिँउ भएको पाइन्छ
लामो समयसम्म सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको नेपाली साँगितिक क्षेत्रको अवस्था हालसम्म पनि जिँउका तिँउ भएको पाइन्छ । समयको बदलावसँगै यस क्षेत्रमा विभिन्न प्रविधिको विकास भयो, गुणस्तरको विकाश भयो तर कहिले उकासिएन कलाकारको जिवनस्तर । आर्थिक रुपमा कहिले सबल हुन सकेन नेपाली साँगितिक उद्योग ।
कुनै समय थियो साँगीतिक क्षेत्रमा जतिबेला यस क्षेत्रमा एल्बम सेल्सकै आधारमा सन्तोषजनक आमदानी हुने गर्दथ्यो । उदाहरणका लागि आधुनिक गीतमा ख्याती कमाएका गायक रामकृष्ण ढकालले सुरुवाती चरणबाट नै नाम र दाम दुवै कमाउन सफल भएका थिए । पप संगीतको कुरा गर्नुपर्दा गायक नवीन के भटटराइले नयाँ धार भित्रयाइरहेका बेला यसै क्षेत्रमार्फत जीवीको पार्जन गर्न कठिन नरहेको अवस्था थियो । तर
जब जब नयाँ गायक गायिकाको आगमन भयो । तब तब खस्किँदै गयो नेपाली साँगितिक उद्योग । पहिले पहिले त रेडियो नेपालमा स्वर पास नगरी गीत गाउन नपाइने ब्यवस्था थियो । तर पछि समयको बदलावसँगै त्यो नियम हराएर गयो र स्टुडियो बढेसँगै जन्मिन थाले नव प्रतिभाहरु । पछिल्लो समयमा त यति गायक गायिका नेपाली सँगितिक क्षेत्रमा भित्रिए जसको सहजै गन्ति गर्न कठिन मात्र हैन असम्भव नै छ । हुन पनि दर्शकहरु नै अचेल अन्यौलमा पर्ने गरेको पाइन्छ । किनभने नराम्रा प्रतिभाका बीच राम्रा प्रतिभा बिलाइरहेको वर्तमान अवस्थाको यथार्थ हो । अक्सर सञ्चार माध्यमहरुले पनि जस्तोसुकै गीत बजाइदिनाले पनि राम्रो गीत छाँयामा पर्ने प्रायको ठम्याई छ । यसै गरि पछिल्लो समयमा मिडियासमक्ष पहुँच भएका सम्भ्रान्त वर्गका ब्त्तीहरुको गीत चाहिँ जस्तोसुकै भएपनि घन्किरहेको पाइएको छ ।
अब कुरा गरौँ राम्रा कलाकारहरुले पनि संगीतमा लागेर भोग्नुपरेको अर्को विडम्बनाको बारेमा । त्यो कसरी भने, सबैलाई थाहा छ अहिले एल्बम किनेर सुन्ने श्रोताको जमात १ प्रतिशत छ । प्रविधिको विकासले अन्यलाई सहज वातावरण सिर्जना गराएपनि कलाकारलाइ भने यसले प्रत्यक्ष असर पारेको छ । जब मोबाइलमार्फत नै १००० वटा भन्दा बढी गीत श्रोताले सुन्न पाउँछन भने उनीहरुले चर्को मुल्य तिर्दै एल्बम खरिद गरुन पनि कसरी । किनभने नेपालका अधिकांश श्रोता निम्न वर्गका छन र कम्तीमा २०० रुपैँया पर्ने एल्बम खरिद गर्ने क्षमता उनीहरुको छैन् । त्यसैले विभिन्न प्रोग्राम र कन्र्सटबाट भने केही कलाकारहरलाइ राहत मिलेको छ । तर त्यो पनि सबैले नपाएको अवस्था छ । जसको शत्ति त्यसको भत्ति भनेझैँ पहुँच हुने हरुका लागि मात्र बनेको छ विदेशी प्रोग्राम र कन्र्सट । गायक गायिकाको अर्को आयश्रोत हो सि आर बी टी र पि आर बी टी । तर यो पनि कम्पनी, टेलिकम र अन्य पार्टीसँग भागबण्डा हुँदाहुँदै कलाकारको हातमा भने करीब ५ प्रतिशत आउँने गरेको देखिन्छ । यही विडम्बनात्मक स्थितिबाट उन्मुक्त हुन अत्याधिक राम्रा प्रतिभाहरु विदेश पलायन हुने क्रम पनि बढिरहेको त सर्वविदितै छ ।
साँगितिक क्षेत्र किन अहिले खस्किँदै गएको हो त्यो सबैलाई थाहा छ । यसैलाइ निउनीकरण गर्न विभिन्न साँगितिक समाज पनि गठन नभएका पनि होइनन्। यद्यपी कसैले पनि अहिलेसम्म खालो सार्न सकेका छैनन् । यदि नेपाली साँगितीक क्षेत्र आगामी दिनमा पनि यही अवस्थामा रहे एक दिन राम्रा प्रतिभाको कुनै अस्तित्व नै नरहने कुरा पक्का छ । त्यसैल राज्य लगायत सम्पुर्ण साँगितिक ब्यत्तित्व र संगीतप्रेमीहरु एकबद्ध भइ नेपाली साँगितीक फाँटलाइ जोगाइराख्नु सबैको जिम्मेवारीसरह भएको छ । जय नेपाल जय संगीत ।
आज ईभमा दिपक बज्रचार्य र प्रमोद निर्वाणको एकल शो हुने